Shiinaha Non-xidhka daabaca la tuuro Timaha tuwaalka SPA tuwaalka & alaab-qeybiyeyaasha | HUASHENG
Aan tolmo lahayn-timaha timaha tuwaalka SPA tuwaalka
Magaca badeecada Tuwaalka Timaha La Tuuri Karo
Wax ceyriin 100% Rayon / Cotton, ama ku qas Polyester
Cabbirka furan 40 x 60 cm
Qaabka EF, dheeman, jacquard pattern hannaan caadi ah
Xirxirida 50pcs / bac, bac daabacan kartoo
Muuqaalka Jilicsan, raaxo leh, la noolaan karo, biyo nuugaya
Astaanta Daabacaadda kartoo bacda,
Waxaa laga sameeyaa 100% dhar aan tolmo lahayn, xaashi kasta waa 30x50cm ， 85GSM
50PCS / Bac, dadka isticmaala way jiidi karaan hal xaashi hal mar si ay u tirtiraan timaha.
Qaadashada xoog leh, waxay ka dhigi kartaa timo qoyan dhaqso u qalalan.
Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa tuwaal jirka ah.
Ka dib markaad qubeysato, waxay si dhakhso leh u nuugi kartaa biyaha jirkaaga waxayna iska ilaalin kartaa hargab.
sidoo kale waa iib kulul ee HBS, salon iyo dukaanka qurxinta.
Wax soo saarka lagama maarmaanka u ah nolol maalmeedka.
Caan ka ah hudheelka, HBS, safarka, kaamaynta, dibedda, guriga.
Shukumaankeena quruxda badan ee la tuuri karo oo ay sameeyeen dharka aan la jeexjeexin, waa nooc ka mid ah bey'ada-saaxiibtinimada leh oo la tuuri karo.Waxaa loo isticmaali karaa timo qurxinta, qurxinta qurxinta, HBS, Hoteellada, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa guriga, xeebta ama jimicsiga.
Ku saabsan shukumaanada la tuuro:
1.Soft, raaxo iyo raaxo leh - Tuwaalladaan tayada leh ee tayada sare leh ee SPA-ga waxay bixiyaan tageero dheeri ah iyo nuugid timaha, ciddiyaha, jirka, xoqida wejiga, duubabka, iwm., Iyagoo ku siinaya fursadda ugu fiican.
2.Maal iyo lacag badbaadin - Shukumaankan la tuuri karo hypoallergenic wuxuu yareynayaa nadiifinta iyo guud ahaan shuruudaha miisaaniyadda
3.Taageerada bidix, timaha iyo maqaarka - Shukumaanada laga sameeyay dunta lafdhabarta ee aan gogol laheyn ayaa ka badbaado iyo nadaafad badan, taasoo gacan ka geysaneysa yareynta faddarada iskutallaab la'aanta urta.
4.Unashing at qiimo macaamiisha waqti - Hal-mar shukumaan qubeyska raaxada ah si ay uga caawiso shaqaalahaaga inay diiradda saaraan baahida macaamiisha, tababarka ama adeegga, iyo in la yareeyo waqtiga dharka lagu dhaqo
5.Bagaarsiinta - Shukumaanada la iska tuuri karo ayaa ku haboon milkiilayaasha meheradaha doonaya inay sii daayaan sagxadda qiimaha leh ee qalabka adeegga dharka.
Waxay ku fiicantahay nadaafada shaqsiyeed xaaladaha degdega ah ama kaliya kaydinta markii aad kuxirantahay waajibaadka dheeraadka ah.
Jeermis Bilaash ah
Nudaha la iska tuuri karo ee qashinka lagu maydho iyadoo la isticmaalayo saxarka dabiiciga ah ee saafiga ah
Ma jiro wax ilaaliyaal ah, Aalkolo la'aan, Ma jiro walxo dhalaalaya.
Koritaanka bakteeriyada waa wax aan macquul aheyn maxaa yeelay waa la qalajiyey waana la tuuri karaa.
Tani waa badeecad bey'adeed u wanaagsan oo laga sameeyay wax dabiici ah oo dabiici ahaan u baabiin kara isticmaalka ka dib.
1. Ma waxaad tahay shirkad ganacsi ama warshad?
waxaan nahay soo saare xirfadle ah oo bilaabay inuu soo saaro alaabooyin aan tolmo wanaagsan lahayn sanadkii 2003. waxaan haynaa Shahaadada Shisheeyaha Soo Dejinta & Dhoofinta.
2. sidee baan kuu aamini karnaa?
waxaan haynaa kormeerka 3-aad ee SGS, BV iyo TUV.
3. ma heli karnaa tijaabooyin ka hor intaanan dalban?
haa, waxaan jeclaan lahayn inaan soo qaadno shaybaarro tayo iyo tixraac xirmo ah oo aan xaqiijino, macaamiisha waxay bixiyaan kharashka dhoofinta.
4. Muddo intee le'eg ayaynu alaab heli karnaa ka dib markii aannu amarro dalbanno?
markii aan helno deebaaji, waxaan bilownaa inaan diyaarino alaabta ceyriinka ah iyo xirmooyinka xirmooyinka, oo aan bilowno wax soo saar, badanaa waxay qaadataa 15-20days.
haddii xirmo OEM gaar ah, waqtiga hoggaanka noqon doonaa 30days.
5. Maxay tahay faa'iidada aad u leedahay alaab-qeybiyeyaal badan?
oo leh khibrad soo-saar 17 sano ah, waxaan si adag u xakameyneynaa tayada wax soo saar kasta.
iyada oo la adeegsanayo taageerada injineer xirfad leh, mashiinadeena dhammaantood dib ayaa loo hagaajiyay si loo helo awood wax soo saar sare iyo tayo wanaagsan.
dhammaan xirfadleyda Ingiriisiga ee xirfadleyda ah, xiriirka fudud ee u dhexeeya iibsadayaasha iyo iibiyaasha.
alaabta ceeriin ee aan soosaarno annaga qudhayadu, waxaan leenahay qiimaha warshad tartan ee alaabooyinka.
Hore: Tuwaalka Bath La Tuuri Karo
Xiga: Shukumaan Qallalan Oo Waji Ah
Nadiifinta Masaxa Bixiyaha
Shukumaan Wajiga ah
Nadiifinta Nadiifinta la Tuuri karo
Tuwaalka Jimicsiga La Tuuri Karo
Nadiifinta Nadiifinta Reerka La Tuuri Karo
Nadiifinta Nadiifinta Jikada
Nadiifinta Nadiifinta ee Aan Xidhnayn
Shukumaan Bathwo ah
Shukumaan Waji Ah Oo Aan Laheyn